သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): January 2010
ငါ့ကို နှိပ်စက်နေတာ ကြာရောပေါ့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 10:24 8 comments:
နှင်းငွေရောင် ဖြူလွှ..... တူစွသဏ္ဍာန်ပေ.. ငွေရည်ပုလဲနုတို့... စုခါဖျန်းတော့... လန်းဆန်းစိုပြေ... နှင်းတွေဝေကျ.. ဆောင်းဟေမန္တ... နှောင်း...ပြောင်းပြန်တော့လေ...
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ကမှန်း မသိသည့် နှင်းပျောက်တဲ့နွေ သီချင်းလေးက လေလှိုင်းထဲ လွင့်ပါလာသည်။
ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းအေးလှသည့် ဆောင်းလယ်ကာလနှင့် ထိုသီချင်းကား လားလားမျှ အပ်စပ်မှု မရှိလှပေ။
သို့သော်.. ထိုသီချင်းလေးက လွမ်းဆွေးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ တမ်းတမှုကို ဖြစ်စေသည်။ မှန်းဆမှုကိုဖြစ်စေလေသည်။
ကလင်... ကလင်... ကလင်...
မိုဘိုင်းမြည်သံကြားမှ သီချင်းအာရုံကြောနောက် လိုက်မျောနေမိသည့် စိတ်တို့ကို ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရသည်။ အော်... ချစ်သူလေးဆီက ဖုန်းကိုး။ မေ့နေလိုက်တာ။ တည်းခိုနေသည့် ဟိုတယ်ကို ည ၇ နာရီအရောက်ပြန်ခဲ့မယ် ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တာ။ အခု ရှစ်နာရီတောင် ထိုးခါနီးနေပြီ။
အင်းလေးကန်ပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူလှသည့် အင်းကြီးတစ်ခုထဲသို့ ချစ်သူလေးနှင့်အတူ အပျော်ခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်က လေညှင်းခံထွက်ရတာကို အရသာတစ်မျိုးဟုထင်သည်။ ကျနော် အင်းတစ်လျောက် လေညှင်းခံထွက်ချင်ကြောင်း ချစ်သူလေးကို ပြောပြလိုက်သည်။ တစ်နေ့လုံးလျောက်လည်ထားခဲ့ကြတဲ့အတွက် ချစ်သူလေးက ခြေဖမိုးလေးတွေ နဲနဲယောင်ကိုင်းနေသည်။ သူက ဟိုတယ်မှာ ဆေးလူးရင်းအနားယူဦးမယ်လို့ ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို ဟိုတယ်မှာ ထားခဲ့သည်။ ထိုဟိုတယ်သည်လည်း အင်းအတွင်း(အင်းထဲ)၌ပင်ဖြစ်သည်။ ညစာစားအပြီး ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ အင်းထဲသို့ လှေတစ်စင်းငှားကာ ကိုယ်တိုင်လှော်ခတ်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည်။ လေညှင်းခံရင်း ကြယ်လစုံသည့် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရင်းဖြင့် အချိန်တွေ အတော်လေးတိုက်စားသွားခဲ့သည်။
"ကိုရေ... ၇ နာရီပြန်လာမယ်ဆိုပြီး အခု ရှစ်နာရီထိုးတော့မယ်၊ ပြန်လာပါတော့။ တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းတယ်"
"အော်... ချစ်လေး... အခု ကို ပြန်လာပါပြီ။ မကြာခင်ရောက်တော့မယ်နော်"
မျှော်နေရှာပြီဖြစ်သည့် ချစ်သူရှိရာ ဟိုတယ်သို့ လှေကို အပြင်းလေး လှော်ခတ်ခဲ့သည်။ ဟိုတယ်အခန်းကို ပြန်အရောက် ချစ်သူ၏ ဆီးကြိုပွေ့ဖက်မှုက လေညှင်းခံခဲ့သည့် ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအား နွေးထွေးပူရှိန်းမှုကို ဖြစ်စေလေသည်။
"စောင့်နေရတာ မောလှပြီ။။ ဘယ်တွေ လျောက်သွားနေတာလဲ ကိုရယ်... ကိုမရှိတဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ နာရီတွေ အရမ်းနှေးနေသလိုပါဘဲ။ ကို..အခြားတစ်ယောက်နှင့် အပျော်ရှာနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်"
မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားကလေးဖြင့် ကျနော့်မျက်နှာကို သူ စူးစမ်းသလိုကြည့်သည်။
"ချစ်ကလဲကွာ။ သိရဲ့ သားနဲ့။ ကို့ဘ၀မှာ ချစ်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ မိန်းခလေးတွေအတွက် အချစ်တွေ မရှိတော့ပါဘူးကွာ"
"ဒါဘဲနော်။ ချစ်ကို ပစ်ထားခဲ့ရင်တော့ အဆိုးမဆိုနဲ့... ချစ်က လိုက်ရှာပြီး အတူတူသေပွဲဝင်...."
သူ့စကားမဆုံးခင် သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို ကျနော့် လက်ချောင်းလေးများဖြင့် အသာလေးပိတ်လိုက်သည်။
ချစ်ရည်ဝန်းလဲ့နေသည့် သူ့မျက်ဝန်းထဲ၌ စိုးရိမ်နေသည့်အရိပ်အယောင်အချို့ ကို ကျနော်ဖတ်ရှုမိလိုက်သည်။
ကျနော့်ကို တကယ် နစ်နစ်ကာကာ ချစ်နေသည့် မိန်းခလေးဖြစ်သည့်အတွက် ကျနော်ကလဲ ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းပြီး သူ့ကို ချစ်ခဲ့ရပါသည်။
"အော်... ချစ်လေးရယ်.. ဆက်မပြောပါနဲ့တော့... ကိုတို့ ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူးနော်။ မကြာခင်မှာ... လက်ထပ်ကြတာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား"
ဟန်ပါပါဖြင့် ပြုံးရွှင်စွာ ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည့် သူ့အမူအယာလေးသည် ခုန်နေသည့် ကျနော့်ရင်ကို ဆွပေးသယောင် ထင်မိလေသည်။ စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျနော် သူ့ကို သိမ်းကြုံးဖက်ယူမိလိုက်လေသည်။ အခန်းအတွင်းထဲ၌ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိသည့်အတွက် လွတ်လပ်မှုက ကိုယ့်ဘက်ပါလေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု နီးကပ်စွာထိတွေ့မှုကြောင့် ဖော်မပြနိုင်သည့် ဝေဒနာကိုယ်စီ၏ ၀င်ရောက်စိုးမိုးမှုအောက် နှစ်ယောက်သား ရောက်သွားကြလေသည်။
"ချစ်ကလဲ ကို့ကို အရမ်း အရမ်းကို ချစ်နေမိပြီ ကိုရယ်"
ည၏ဖျားယောင်းမှုနှင့် မလင်းမမှောင် မီးထိန်ထိန်လေး၏ ဆွဲဆောင်မှုတို့ကြောင့် လွတ်လပ်မှုတို့ ကမ်းကုန်လေပြီ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဆွတ်ဖျန်းထားသည့် ခပ်ပျော့ပျော့ပြင်သစ်ရေမွှေးရနံ့က ကျနော့်နှာသီးဝကို လာမိတ်ဆက်သည်။ ကျနော်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားသည်။ ခပ်ပါးပါးလိမ်းခြယ်ထားသည့် မိတ်ကပ်တို့ဖြင့် ၀င်းလက်နေသည့် သူမပါးပြင်လေးက ကျနော့်ကို ဖိတ်ခေါ်နေသယောင်ထင်မိသည်။ လေယူရာပါမည့်ဟန် ခပ်နွဲ့နွဲ့ ခပ်ယိုင်ယိုင် သူမခန္ဓာကိုယ်လေးက စည်းရုံးစရာ သိပ်မလိုတော့ပေ။ မှိတ်တစ်ဝက် ဖွင့်တစ်ဝက်ဖြစ်နေသည့် သူမ၏ မျက်လုံးစင်းစင်းများက ကျနော့်၏ စိတ်ကို တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိအောင် ဆွဲဆောင်နေလေပြီ။
မထူးတော့ပြီ။ စိတ်၏လွတ်လပ်မှုနောက် ခန္ဓာကိုယ်လိုက်ပါသွားဖို့ ဟန်ရေးပြင်မိသည်။ ခပ်တင်းတင်းပွေ့ဖက်ထားသည့် သူမ၏နူးနူးညံ့ညံ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပို၍တင်းကြပ်စွာ ဖက်လိုက်ပြီး ဖောင်းအိနေသည့် သူမပါးပြင်လေးကို အားရပါးရ မွှေးမွှေးပေးဖို့ သူမ၏ မျက်နှာကို အသာလေးဆွဲယူလိုက်သည်။ သူမလည်း အလိုက်ထိုက်ပါလာလေသည်။ ရင်ခုန်ချင်စရာကြီးပါလားနော်။
ထိုအခိုက်၌ မျှော်လင့်မထားသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ကျနော့်နှာခေါင်းသည် အသက်ရှူ၍မရတော့။ နှာခေါင်းပေါက်ပိတ်သွားသလိုလိုခံစားလာရသည်။ အသက်ရှူရလည်း ကြပ်လာသည်။ မောပန်းသလိုလို ခံစားလာရသည်။ ဒုက္ခဘဲ။ အင်းစောင့်နတ်မကြိုက်လို့ ပြုစားလိုက်တာများလား။ အရေးအကြောင်းဆို ဒီနှာခေါင်းက ပြဿနာပေးပြီ။ နှာခေါင်းပေါက်အတွင်းမှလည်း အရည်တစ်ချို့ စီးကျလာသည်။ ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်။ ဟတ်ချိုး... ဟတ်ချိုး... ဟတ်ချိုး။ နှာသုံးခါတိတိချေပြီး အိပ်စက်ရာမှ ကျနော်လန့်နိုးလာသည်။ အော်... အိပ်မက်ပါလား။ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလဲ ခြုံစောင်တွေလွတ်လို့။ ငါ... နှာစေးနေပြီ။ နှာရည်တွေလဲ ယိုလို့ပါလား။ ဒီအိပ်မက်နှယ်.. မသိတတ်လိုက်တာ.. မွှေးမွှေးပေးပြီးမှ လန့်နိုးလာရင်လဲ ရရဲ့ သားနဲ့။ ခုတော့.. :P.. (: ..။ လန်ဒန်ရောက်သည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်လေပြီ။ နေမကောင်းဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ တစ်ခါမျှ နှာစေး ချောင်းဆိုးတောင် မဖြစ်ဖူးခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် ယခု ကျနော် မှတ်တမ်းတင်မိလေသည်။ ဤနေ့(၃၀၊၁၊၂၀၁၀)သည်ကား လန်ဒန်ရောက် ကိုကိုမောင်၏ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နှာစေးခြင်းပင် ဖြစ်ပေတော့သတည်း ဟူ၍။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:057comments:
လျို့ ဝှက် ကမ္ဘာမှာ
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:145comments:
တစ်လမှာ ရက် ၃၀
တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ
တစ်နာရီမှာ မိနစ် ၆၀
တစ်မိနစ်မှာ စက္ကန့် ၆၀။
၅ ရက်နှင့် ၆ နာရီကို ဘေးဖယ်ထားလို့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 20:55 12 comments:
ဘုရင်မဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခြင်္သေ့ပါဘဲ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:116comments:
တိမ်မဲညိုပြတ်ရွေ့ တစ်ချို့ 
မုတ်သုန်လေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွေ့ပိုက်မှုအောက်
မြစ် ချောင်း အင်း အိုင် လယ်ယာမြေတို့ကို
ရေပြန်ဝေပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ ပေါ့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:47 10 comments:
ဗျိုင်းဥ ၀မ်းဘဲဥ ကျီးကန်းဥ
ဖွတ်ဥ လိပ်ဥ.. စတဲ့... စတဲ့
ခပ်ပေါပေါသီအိုရီတစ်ခု ထုတ်ကြလေရဲ့ 
သေးမျှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကြောင့်
အပျင်းပြေ ကျီးကန်းအိမ်ကို ၀င်တိုက်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:123comments:
တောတွေပြုန်းမှာ ကြောက်မိနေလေရဲ့ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 02:07 11 comments:
A majestic seraph
A sip I take espresso fromacup
Thinkingathought as regards us
Faithful and righteous is our love.
Incredibly her own spirit is up
Let nothing be among familyagap
Impossible is being the love cut.
Before her nest she bravely stands up
Quick and wit she always hugs
My appreciation for her is above
She isareal majestic seraph.
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:172comments:
A historic affection
Seeing her twinkling eyes
I discern how she is actually kind.
My love is full of sky
Feminist that I never deny.
“Patriarchy” said me when she smiles
“Matriarchy” encouraged me while she shies.
Our love by no means turns into crime
So, both need not really cry.
We in no way consumealie
Both of us know each of our minds
Therefore, I left all the things behind
Only I desire her love to me joined
Our affection each other becomes tied.
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 04:08 1 comment:
My glorious ego
Sinceatime of Millennia eon ago
One thing muted in my heart inner core:
Diverse angels tried to awake my love-soul
I uttered rudely them “No.. No.. No
Irrespective of being detested drove them “Go.. Go.. Go:
Previous year I discoveredalady having lore
I fall in love with you that I told
She didn’t eschew my love-gold:
She smiles at me withathrilled awe
Infallible is our final goal
What I love her is more and more.
Everyday I greet her “Hello.. Hello”
That is my strength and glow.
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 23:213comments:
Forward mail က တစ်ဆင့်ရလို့ မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်ထားလိုက်တာပါ။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၈၄/ ၂ဝဝ၉
နေပြည်တော်မြို့၊ ၁၃၇၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁) ရက်
(၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်)
အကြောင်းအရာ။ ။ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်ခများ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
၁။ တပ်မတော်သည် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို အစဉ်တစိုက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် လျက်ရှိသည်နှင့်အညီ ဝန်ထမ်းများ၏ စားဝတ်နေရေး သက်သာချောင်လည်မှု ရှိစေရန် လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်နေ့သို့ ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်းများကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၂။ သို့ပါ၍ အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခွင့်ပြုထားသော ရာထူးများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်းထားများကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားအတိုင်း တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
၁၅၀၀၀- ၁၀၀၀- ၂၀၀၀၀
၃၅၀၀၀- ၁၀၀၀- ၄၀၀၀၀
၂၁၀၀၀- ၁၀၀၀- ၂၆၀၀၀
၄၁၀၀၀- ၁၀၀၀- ၄၆၀၀၀
၂၇၀၀၀- ၁၀၀၀- ၃၂၀၀၀
၄၇၀၀၀- ၁၀၀၀- ၅၂၀၀၀
၃၃၀၀၀- ၁၀၀၀- ၃၈၀၀၀
၅၃၀၀၀- ၁၀၀၀- ၅၈၀၀၀
၃၉၀၀၀- ၁၀၀၀- ၄၄၀၀၀
၅၉၀၀၀- ၁၀၀၀- ၆၄၀၀၀
၄၅၀၀၀- ၁၀၀၀- ၅၀၀၀၀
၆၅၀၀၀- ၁၀၀၀- ၇၀၀၀၀
၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၉၇၀၀၀
၁၀၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၁၀၀၀၀
၁၂၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၃၀၀၀၀
၁၄၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၅၀၀၀၀
၁၆၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၇၀၀၀၀
၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀
၁၉၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၂၀၀၀၀၀
၂၁၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၂၂၀၀၀၀
မှတ်ချက်။ ။ နှစ်တိုးများကို (၂) နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ခံစားခွင့်ပြုရန်။
၃။ လက်ရှိလစာနှုန်းမှ တိုးမြှင့်လစာနှုန်းသို့ ပြောင်းလဲသွားသည့်အခါ နှစ်တိုးများကို လက်ရှိလစာနှုန်းအရ နှစ်တိုးကာလများအတိုင်း နှစ်တိုးဆက်လက် ခံစားခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ တိုးမြှင့်လစာနှုန်းသို့ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် နှစ်တိုးကျရောက်သည့်နေ့များ ပြောင်းလဲသွားခြင်း မရှိစေရ။
၄။ အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိ နေ့စားအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခကို အလုပ်ချိန် တစ်နေ့ (၈) နာရီအတွက် လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသော လုပ်ခကျပ် (၅ဝဝ) မှ လုပ်ခ (၁ဝဝဝ) သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည်။
တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်းများ
၅။ တပ်မတော်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော လစာနှင့် စရိတ်နှုန်းထားများအပြင် အငြိမ်းစား လစာနှင့် ဆုကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေး ကောင်စီသို့ တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ခံစားခွင့်
၆။ နိုင်ငံခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားအလားတူ ဝန်ထမ်းများသည် ပြည်ပတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်း လက်ရှိခံစားနေသော လစာ နှုန်းများ အတိုင်းသာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထုတ်ယူခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်လည်ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့်အခါတွင် မိမိရာထူး အဆင့်နှင့် လျော်ညီစွာ သတ်မှတ်ထားသော လစာနှုန်းသစ်ကို ခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ဤအမိန့်ကြေငြာစာအရ ခံစားခွင့်များကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွက် လစာမှစ၍ ခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။
၁။ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌရုံး
၄/ အထူး/ ၂ဝဝ၉ ၏ နောက်ဆက်တွဲ (က)
တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မှ တပ်မတော်သားများ၏ အခြေခံလစာနှုန်းသစ်များ
၁။ တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိများ၏ လစာနှုန်းထားသစ်များကိုအောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည် -
၁၇၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၈၀၀၀၀
၁၅၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၆၀၀၀၀
၁၃၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၄၀၀၀၀
မှတ်ချက်။ နှစ်တိုးလစာကို (၂) နှစ် တစ်ကြိမ်ကျ ခံစားခွင့်ပြုသည်။
ဒုတိယဗိုလ်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအထိ ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ် (M.H.R.A) အဖြစ် တစ်လလျှင် ကျပ် (၅ဝဝဝ) ခံစားခွင့်ပြုသည်။
ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းမှုနှင့် သက်စွန့်တာဝန်စရိတ် (M.H.R.A) ကို အငြိမ်းစား လစာတွက်ရာတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ဝ၆/ ၂ဝဝ၉
နေပြည်တော်မြို့၊ ၁၄၇၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် (၁) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းများ၏ လစဉ်ပင်စင် သတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ
၁။ နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအား ၄င်းတို့ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ ၄င်းတို့၏ ပင်စင်လစာကို ဤဝန်ကြီးဌာန၏ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ဝ၄/ ၂ဝဝ၉ တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြ သည့် လစာနှုန်းပေါ်တွင် အခြေပြု၍ လက်ရှိတည်ဆဲ ပင်စင်နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်များ အရ ခံစားခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
၂။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် အငြိမ်းစားယူရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) မူလ အခြေခံနည်းဥပဒေ အတွဲ (၁) အပိုဒ် ၈၆ (က) အရ ငြင်းပယ်ခွင့် ခံစားနေဆဲ ဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ကုန်ဆုံးသည့်နေ့၌ အလုပ်ဝတ္တရားပြန်လည် ထမ်းဆောင်လျင် တိုးမြှင့်လစာနှုန်းအရ ခံစားခွင့်ရှိမည့်လစာကို အမှန်တကယ် ထုတ်ယူရရှိ သော နောက်ဆုံးလစာအဖြစ် မှတ်ယူ၍ ပင်စင်တွက်ချက်ခံစားခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ လက်ရှိပင်စင်ခံစားနေကြသော အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာကို လက်ရှိခံစား နေသည့်အတိုင်းသာ ခံစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ခံစားခွင့်များကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွက် လစာမှစ၍ ခံစားခွင့်ပြုလိုက်သည်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:424comments:
ရာသီဥတုကလဲ ဆိုးရွားလိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆိုးရွားမှုမျိုးပါ။
မြန်မာမှာ နေစဉ်က နှင်းတွေ ကောင်းကင်ပေါ်က ပြုတ်ကျလာတာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးခဲ့ဘူး။ ဒီရောက်မှ နှစ်တိုင်း တွေ့မြင်နေရတယ်။ အရင်ရောက်နေကြတဲ့ သူတွေက ပြောတယ်။ ဟိုတုန်းက ဒီလောက် ဒီမှာ နှင်းမကျဖူးဘူးတဲ့။ (ဟိုတုန်းကဆိုတာ သူတို့ ရောက်နေစဉ် ဆယ့်လေးငါးနှစ်အတွင်းပြောတာဖြစ်မှာပါ)။ ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှ နှင်းတွေ အရမ်းကျတာတဲ့။
ကျနော်လဲ နှင်းတွေကြည့်ချင်တာနဲ့ အတော်ဖြစ်သွားတယ်။ အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ နှင်းတောထဲ လျောက်လည်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ အပူချိန်က အနှုတ် ၅ လောက်အထိ ဆင်းသွားတော့ အပြင်ထွက်ချင်စိတ်တောင်မရှိတာ။ ခရစ်စမတ် မတိုင်ခင်ကထဲက ကျနေတဲ့ နှင်း ဒီနေ့ထိ အပြီးမသတ်နိုင်သေးဘူး။ နောက်နေ့တွေလဲ ထပ်ကျဖို့ ရှိသေးတယ်တဲ့။
ခက်တာက အပြင်မထွက်ချင်လို့ မရဘူး။ ကျောင်းသွားရဦးမယ်လေ။ ဟော်လီးဒေးရက်က ကုန်သွားပြီ။
မြန်မာမှာ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို မိုးအရမ်းအားကြီးရင် ကျောင်းတွေ ပိတ်တတ်ကြတယ်။ ကလေးပီပီ ပျော်လို့ပေါ့။
အခုလဲ စဉ်းစားမိလိုက်သေးတယ်။ နှင်းတွေအရမ်းကျလို့ အတန်းတွေ ပိတ်လိုက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့။
နယ်က ကျောင်းတွေကတော့ ကျောင်းပေါင်း ထောင်ချီပြီး ပိတ်တယ်လေ။ Transport အခက်အခဲကြောင့်ရယ်။ Icy snow တွေရဲ့ ဘေးရန်ကြောင့်ရယ်ပေါ့။
အချို့ ဆို နှင်းကတစ်ဆင့် ရေခဲပြင်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းပေါ်လျောက်ရင်း တဘုံးဘုံး ချော်လှဲကြတာ။
ပျင်းတင်းတင်းနဲ့ဘဲ ဒီနေ့ ကျောင်းကို သွားခဲ့တယ်။ ကျလာတဲ့နှင်းတွေ မျက်စိကို လာလာစင်တဲ့အရသာကလဲ တစ်မျိုးတော့ခပ်ကောင်းကောင်း။ နှင်းမျက်စဉ်း ခပ်ရသလိုလို။ အ၀တ်အစားတွေလဲ နှင်းတွေ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ နှင်းလူသားဆန်ဆန်ပေါ့။ နှင်းထုတွေ ထူထဲပေမဲ့ မြေအောက်ရထားကတော့ အလုပ်လုပ်နေဆဲဘဲ။ ကျနော်သွားရတာလဲ မြေအောက်ရထားနဲ့ပါ။ မြေအောက်ရထားဆိုပေမဲ့ မြေအောက်လျှိုးလိုက် မြေပေါ်ရောက်လိုက်ပါဘဲ။ နှင်းကျနေတဲ့ ရှုခင်းကတော့ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ်။
ခရစ်စမတ် ကျောင်းပိတ်ကထဲက ဆရာနှင့်မတွေ့ရသေးဘူး။ ဒီနေ့မှ အတန်းပြန်စလို့ တွေ့ရမယ်လေ။ ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ရက်တွေ အတော်လေး လွန်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ Happy New Year လုပ်ရဦးမယ်။ ပြီးတော့ ဘာစကားတွေ ဆက်ပြောရဦးမလဲ။ ဟောလီးဒေးအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောရင် ကောင်းမလား။ ဒါမှ မဟုတ် ဟောလီးဒေးအတွင်းမှာ ကြိတ်ပြီး ရေးခဲ့တဲ့ အက်ဆေးအကြောင်းဘဲ ပြောရမလား။ ပြီးတော့....။
စဉ်းစားရင်းနှင့် စာသင်ခန်းထဲ ရောက်လာတယ်။ ဆရာကတော့ မလာသေးဘူး။ ထိုင်စောင့်ရုံပေါ့။ ၁၁ နာရီမှာ စမဲ့အတန်းက ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်ထိ ဆရာက မလာသေးဘူး။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ခြေသံကြားတယ်။ ဆရာလာပြီ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမဟုတ်ဘူး။ ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်။ ဖြုန်းကလဲ ပေါ်လာပြီး စာသင်ခန်း တံခါးဝမှာ စာတစ်ခု ကပ်သွားတယ်။ Transport အခက်အခဲကြောင့် ဒီနေ့ ဆရာမလာနိုင်ပါ၊ နောက်ကျမှ အကြောင်းကြားရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် တဲ့။ အဲဒါမှ ဟိုက် ရှာလပတ်ရည် ပေါ့။ ကြိုးစားပမ်းစား နှင်းထုနဲ့အပြိုင် လာခဲ့ရတာ။ ပြီးတော့ ရထားစရိတ်က ကုန်သေး။ အချိန်က ကုန်သေး။ ကုန်သွားတဲ့ ရထားစရိတ်ကို KFC ၀ယ်စားပြီး ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကို တစ်ရေးတစ်မော အိပ်လိုက်ရရင် ဘယ်လောက်များ ဇိမ်ရှိလိုက်မလဲနော်။ နှမြောလိုက်ပါဘိ။ အဟဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားပီပီ ဆရာမလာဘူးဆိုတော့လဲ ပျော်သလိုလိုကြီး။(ကျောင်းစရိတ်ပိုက်ဆံအများကြီးသွင်းထားရတာကိုတော့ မမြင်ဘူး :D)။
နောက်ဆုံးတော့ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာလဲ ရာသီဥတုမကောင်းရင် အခုလို အတန်းပိတ်တတ်တယ်ဆိုတာ သိခွင့်ရလိုက်ပြီပေါ့။ အတန်းမရှိတော့ ရင်ထဲမှာတော့ ဟာတာတာရယ်။ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။ အချိန်တွေက အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ နေ့လည်စာစားဖို့ကလဲ ဗိုက်က မဆာသေးဘူး။ ဒါနဲ့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး တက္ကသိုလ်နားမှာ ရှိတဲ့ Park (Pub မဟုတ်ပါ) တစ်ခုထဲ ၀င်ပြီး နှင်းတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီလို နှင်းတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကြိုက်တယ်။ (အရေးထဲ ကင်မရာ ရက်စွဲက မှားနေသေးတယ် :P)။ ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား။ မတတ်နိုင်ဘူး။ ငါးမရမှတော့ ရေချိုးပြန်ရုံပေါ့။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:215comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 11:15 10 comments:
အနှုတ် ၅ တဲ့
သွေးစရာမလို မြိကနဲ မြိကနဲပါဘဲ။
မွေးစရာမလို ညှိစွဲ ညှိစွဲ ပိုလို့သာကဲ။
ပိုလို့ ပိုလို့ ချစ်နေမြဲ။ ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 17:14 8 comments:
ဒီဇင်ဘာညလယ်ရဲ့အေးချမ်းမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 07:065comments:
လျပ်စစ်ပန်းတွေ ငုံ ဖူး ပွင့်လို့
နှင်းထုရဲ့အင်အားကို
(၁၊၁၊၂၀၁၀ နံနက် ၁း၁၅)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 09:42 8 comments: